बलिउडका वरिष्ठ अभिनेता शशि कपुरको निधन « Ramailo छ
बलिउडका वरिष्ठ अभिनेता शशि कपुरको निधन
समय : 8:15 pm
बलिउडका वरिष्ठ अभिनेता शशि कपुरको ७९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । कपुरको उपचारका क्रममा सोमबार मुम्बईस्थित कोकिलाबेन अस्पतालमा निधन भएको हो । उनको उनको साँझ ५ बजेर २० मिनेटमा निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
कपुर विगत केही वर्षयता मृगौला सम्बन्धि रोगबाट ग्रस्त थिए । उनी डायलसिसको साहारामा थिए । उनी केही सातादेखी सिकिस्त थिए । आइतबार मात्रै नलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । दिवंगत कपुरको मंगलबार बिहान अन्त्यष्ष्टि गरिनेछ । स्व. शशी कपुरले सन् १९६१ मा ‘धर्मपुत्र’ फिल्मबाट बलिउडमा अभिनय यात्रा सुरु गरेका थिए । उनले डेढ सय फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । शशी कपुरप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन !
नविन के.भट्टराईको ‘सम्झिरहन्छु’ रिलिज (भिडियो)